MR MRT: Triangle Different Versions - တြိဂံမူကွဲများ
Triangle Different Versions - တြိဂံမူကွဲများ
ဗာရာဏသီ်၌လည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓဂယာ၌လည်းကောင်း၊ နာလန္ဒာ၌လည်းကောင်း၊ ဝေသာသီ၌လည်းကောင်း၊ ကုသိနာရုံ၌လည်းကောင်းတည်း။ ပီအေပီ အသဲစွဲ ကိုစလုံး မစလုံးတို့သည် ဧည့်လမ်းညွှန် ကိုကုလား၏ အဖြေကို သဘောကျကြဟန် မတူတကား။ ကိုကုလားသည်ကား သူ့ကုလားပြည်ကြီး၏ ဒီမိုကရက်တစ် ဂုဏ်ရည်ကို မေးခွန်းများ ဖြေဆိုတိုင်း ၀င့်ကြွားစွာ ထည့်သွင်းညွှန်းဆိုလေ့ ရှိသည်သာတည်း။
“ဘေးမဲ့နွားတွေ မြို့ထဲလျှောက်သွားနေတော့ ရှုပ်တာပေါ့။ ဒါကို အစိုးရက ရှင်းမပစ်ဘူးလား။ :(”
“ဘယ်ရမလဲ။ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါ ဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံ။ နွားတွေလည်း လွတ်လပ်ခွင့် ရှိတယ်။ :)”
“လူသေတိုင်း မြစ်ကမ်းမှာ မီးရှို့ပြီး ရေမျှောနေကြတော့ မြစ် ညစ်ပတ်တာပေါ့။ သဘာဝ အရင်းအမြစ်အတွက် ဘေးအန္တရာယ်ပဲ။ ဒါကို အစိုးရက မတားမြစ်ဘူးလား။ ခေတ်မီ နည်းစနစ်တွေ မသုံးဘူးလား။ :(”
“မြို့တွေမှာတော့ ခေတ်မီ နည်းစနစ်တွေ ရှိတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ကျန်ရစ်သူတွေက ရေမျှောချင်ကြတာ။ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုလည်း ပါနေတာဆိုတော့ အစိုးရက တားလို့ မရဘူး။ အစိုးရက အစိုးရပဲ (Government is government.)။ အစိုးရ(Government) ဆိုပေမယ့် လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ မရဘူး။ ဒါ ဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံ။ :)
ဒါက ဟိန္ဒူဘာသာရေး။ အိန္ဒိယမှာ မဟတ္တမ ဗုဒ္ဓ ခေတ်တုန်းနေ ဒီနေ့ခေတ်ထိ ဟိန္ဒူတွေ လွှမ်းမိုးနေတာပဲ။ မဟတ္တမဗုဒ္ဓ ပရိနိဗ္ဗာန်စံ (passed away)တော့ ဟိန္ဒူထုံးစံအတိုင်း သူ့ ရုပ်အလောင်းကို မြစ်ကမ်းမှာ မီးရှို့(တေဇောဓာတ်လောင်)ခဲ့သေးတာပဲ။ မွတ်ဆလင်တွေ ၀င်လာတော့လည်း ဟိန္ဒူကတော့ ဟိန္ဒူပဲ။”
“ငါတို့ကို သံဂါယနာတင်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေ ဘာဖြစ်လို့ လိုက်မပို့တာလဲ။ မထမသံဂါယနာ၊ ဒုတိယသံဂါယနာ၊ တတိယသံဂါယနာ။ ဒီနေရာတွေ အရေးကြီးတဲ့ နေရာတွေပဲ။”
“လမ်းမကောင်းဘူး ဆာ . . .။ အက်ဆီးဒင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။”
“ဒီနေရာတွေ သွားလို့လာလို့လွယ်အောင် အစိုးရက လုပ်ပေးရမှာ။”
“ဟိန္ဒူတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ သိပ်လုပ်မပေးချင်ကြဘူး။”
“တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင် ရှယ် လုပ်မှာ။ ဘာသာရေးအရ မယုံလည်း စီးပွားရေးအရ လုပ်မှာပဲ။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လုပ်ငန်း။”
“စီးပွားရေးမှန်း သိပေမယ့် သူတို့စိတ်ထဲမှာ စွဲနေတာ။”
ဧည့်လမ်းညွှန် ကိုကုလားသည် ဟိန္ဒူပင် ဖြစ်သော်လည်း သူ့ဟိန္ဒူတို့၏ အစွဲကြီးပုံကို ဖွင့်ပြသည်သာတည်း။ မစ္စတာ လီစိန်လွန်းဖြစ်စေ၊ မစ္စတာ ဂိုချောက်တောင်ဖြစ်စေ၊ မစ္စတာ လီကွမ်ယုဖြစ်စေ။ မည်သည့် ခေါင်းဆောင်မျိုးမဆို။ လုပ်ကြမှာ သေချာသတည်း။ အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်၌လည်း ဦးသိန်းစိန်သည်လည်းကောင်း၊ ဦးခင်ညွန့်သည်လည်းကောင်း၊ အာဏာပိုင်လူကြီးမင်း တစ်ယောက်ယောက်သည်လည်းကောင်း ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ရှယ်သည်ထက်ရှယ်အောင် လုပ်မှာ သေချာသတည်း။ စီးပွားဖြစ် သာသနာပြုလုပ်ငန်း တကား။ နာမည်လည်း ကြီးနိုင်သည် တကား။ ဟိန္ဒူတို့ စိတ်၌ စွဲသည်ကား စီးပွားပင် မဖြစ်စေကာမူ . . .။ စနစ်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းခြင်းလည်း ပါရမည်သာတည်း။
အာဏာရှင် ရှင်လိုကရှင်၊ မရှင်လိုလည်း ရှိစေ။ ဒီမိုကရေ စီလိုကစီ၊ မစီလိုလည်း ရှိစေ။ အစွဲ ကြီးလိုကကြီး၊ မကြီးလိုလည်း ရှိစေ။ စနစ် ကျလိုကကျ၊ မကျလိုကလည်း ရှိစေ။ သွားလေသူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည်ကား လမ်းပေါ်၌ ဆေးရိုးမလှန်းကြစိမ့်သောငှာ သတိပေးခဲ့သည်သာ။ မျက်မှောက်ခေတ် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၌ စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ဒီမိုကရေစီစနစ် ထူထောင်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည် ဟူ၏။
“မဟတ္တမ ဗုဒ္ဓရဲ့ နောက်ဆုံး သုတ္တန်ကို ဒီနေရာမှာ ဟောခဲ့တာ။
မဟတ္တမ ဗုဒ္ဓ နောက်ဆုံး ဘုဉ်းပေးခဲ့တဲ့ ဆွမ်းကြောင့် ၀မ်းပျက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အားလုံး သိကြပြီးသားပဲ။ နောက်ဆုံးဆွမ်းကို ၀က်သားလို့ ပြောကြတယ်။ မဟတ္တမ ဗုဒ္ဓ လက်ထက်ကနေ ဒီနေ့ခေတ်အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကြည်ညိုလေးစားရတဲ့သူကို ၀က်သားပေးလှူတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘယ်သူမှ ၀က်သား မလှူဘူး။ မှိုအပါအ၀င် အသီးအရွက်တွေ ရောချက်တာ ဖြစ်မယ်။
စောစောက မှောင်နေလို့ မြစ်ကို မမြင်ရဘူး။ အဲဒီမြစ်ရောက်တော့ မဟတ္တမ ဗုဒ္ဓက ရှင်အာနန္ဒာကို ရေတောင်းတယ်။ လှည်းတန်းကြီးက မြစ်ထဲ ဖြတ်သွားထားတာဆိုတော့ ရေ နောက်နေတယ်။ မဟတ္တမဗုဒ္ဓလည်း ဒီဟိုက်ဒရေးရှင်းကြောင့် ရေဆာလှပြီ။ ရေ ထပ်တောင်းတယ်။ သုံးကြိမ်တောင်းတော့ ရှင်အာနန္ဒာ မနေသာတော့ဘူး။ ရှိတဲ့ရေကို ခပ်ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒီရေ သောက်ပြီးတော့ မဟတ္တမ ဗုဒ္ဓရဲ့ ၀မ်းရောဂါ ပိုဆိုးသွားတယ်။”
မြန်မာဗုဒ္ဓ၀င်၌ ဘုရားရှင်၏ တန်ခိုးတော်ကြောင့် ရေနောက်များ ရေကြည်ဖြစ်သွား၏။ ဘုရားရှင်၏ နောက်ဆုံးဆွမ်း မူကွဲကို (“နောက်ဆုံးဆယ်လ မြတ်ဗုဒ္ဓ”တရားတော်၌) သဲကုန်း(သီတဂူ)ဆရာတော် (ဒေါက်တာ . . .) ဟောကြားဖူးသည်။
ကိုကုလား၏ လော့ဂျစ်ကယ် ပရက်ဇင်တေးရှင်းကို ကျန်းမာရေး လိုက်စားကြသည့် စလုံးတို့ လက်ခံနိုင်ပုံရသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ခန္ဓပရိနိဗ္ဗာန် ၀င်စံလုနီးပါး (သေလုမျောပါး) ဖြစ်နေသည့် ဘုရားရှင်ကို စလုံးတို့က “တန်တောက်ဆင်းဆေးရုံ” အရေးပေါ်လူနာဌာနသို့ ပို့လိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သက်သေအထောက်အထား ခိုင်လုံလွန်းလှ၏။
(ဆက်ရန် မရှိသေးပါ . . .)
Posted by Ashin Acara. at 6:44 AM